Soomaalaay … Ma garateen gobannimiyo, gunnimo waxay kala yihiin? | YoobsanNews.com
Nin beeraley ah ayaa ka soo caraabay beertiisa, waxa uu soo raacay gaari bas ah si uu dib ugu soo laabto gurigiisa oo ku yaalla bartamaha Magaalada, waxa ay indhihiisu qabteen oday da’ ah oo dhinac ka fadhiya kursiga uu fadhiyo midka ku dhegan.
Ninka odayga ah waxa uu dhabta ku heystaa jawaan weyn oo hadba dhinac uu ka dhunkanayo, waase mid luxaya jawaanka rubi saac waliba .
Markii muddo afar saacadood ah ka soo wareegatay, odaygana uu weli luxayo jawaanka ayuu ninkii beeraleyda ah yiri , xaaji maxaad sameyneysaa?
Odaygii ayaa si degan oo kalsooni ay ku dheehan tahay ugu jawaabay oo yiri , adeer waxaan ugu deeqayaa xeyntani dooliyaasha ah xarunta qaranka ee cilmi baarista si ay ugu sameeyaan tijaabooyin dawooyinka casriga ee dalkeenu sameeyo.
Ninkii beerladeyda ah oo yaaban ayaa yiri, dooli ! ma waxa aad dhunkaneysid oo ruxeysid ma jiir aad soo uruurisaa?!
Odaygii ayaa ku jawaabay si caqli ay ku jirto, waxa uuna yiri , haddii dooligu helo muddo 15 daqiiqo oo nasiinno ah, waxa uu baadi doon u galayaa xal uu kaga bixi karo ama uu ku duleelin karo jawaanka, hayeeshee luxitaanka wuxuu tabar dareynayaa awooddii uu ku fikiri lahaa, qaarkoodba qaar kale ayaa madaxa isku dhufsanaya.
Odayga , ayaa sheekada ku soo gunaanuday, waxaan rajeynayaa wiilkeygiyow inaad garwaaqsatid wixii aad gocaneysay !
Haddaba, marka aad si fiican u dhuuxdid sheekada sare ku qoran, waxaad ogaan kartaa sida shisheeyuhu u rog rogayo Soomaalida si aaney u garan xal u helidda dhibta heysata .
Abwaan Cabdulqaadir Cabdi Shube , ayaa bishii November 23, 1993 kadib muddo laba sano ah qaran burburkii dalka , waxa uu tiriyay maanso huwaneyd dhibta Soomaaliya heysta iyo faragelinta shisheeye ee aan dhammaadka laheyn.
Abwaan Shube, maansadan waxa uu ku hoga-tusaaleeyay dacaska iyo daleelanka laga kororsaday qaran burburkii dalka Soomaaliya , waxa uuna ku booriyay Soomaalida in dib loo xisaabtamo , gacmuhuna ay wada jiraan , isagoo ka digay khilaafka iyo kala tagga.
Haddaba, dhagayso, dhugo oo akhriso maansada “Giraan”.
Garbaha midna saari jirin [?] Marbaa guunyo iyo maal
Gabbaad ma la dooni laa? [?] Haddaan daal gabax la odhan
Gu’ soo korayay lahayd [?] (war) Haddaan nahay geeska Bari
Naf aan mawdkeedi gelin
Jeenyaha kaga dhigo galuul [?] Geddaa isagaa la yimid!
Ayuu geed darac le tegay [?] Intuu gam’ay buu dug yiri
Saaluu yidhi noo gar qaad: [?] “Ninkii cunay gabannadii
“Gobtii bahashow u kuli [?] Malaha annaaga gefnee
Aad gawsaha wada tedhide? [?] Wuxu yiri: “waa mid gare
Geeskayga goray ku daaq [?] Kolkii gabalkuu u dumee
Dheydaan soo gaadan iyo [?] Diraac gubanee kacdaa
Garaad ma siyaadsateen? [MAYA!] Ma garateen gobannimiyo
Guji, linkigan hoose si aad u daawatid, una dhageysatid gabayga.
Previous: Maalinta la xisaabtan la’aanta kuwa dhibaateeya Saxafiyiinta oo laga Xusay Muqdisho
Next: Damaca Imaaraadka iyo Dabacsanaanta Madaxda.